Boqortooyada Sucuudiga Oo Bilawday Qorshe Cusub Iyo Istaraatijiyada Ay Ku Bartilmaameedsanayo Dawlada Turkiga - Borama News Network boramanews.com
Boqortooyada Sucuudiga Oo Bilawday Qorshe Cusub Iyo Istaraatijiyada Ay Ku Bartilmaameedsanayo Dawlada Turkiga
Dowladda Sucuudiga ayaa bilowday hirgalinta qorshe sir ah oo ay kaga cad-goosanayso dowladda Turkey, kaddib markii Maxamed Bin Salmaan uu dulqaad dheeri ah u muujiyay madaxweyne Recep Dayyip Erdogan taaso salka ku haysa dilkii wariye Jamal Khashoggi.
Qorshahan sirta ah ayaa lagu faahfaahiyay warbixin qarsoodi ah oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa furan oo xog-ogaal ah oo ay diyaariyeen xulufada boqortooyada ee Imaaraadka.
Warbixinan sirta waa mid ka mid ah qormooyin taxane bille ah ee ay soo saarto Xarunta Siyaasadda ee Imaaraatka,( Emirates Policy Centre) oo xiriir dhow la leh dowladda iyo hay’adaha ammaanka Imaaraadka.
Qorshahan sirta ah oo cinwaankeedu ahaa “Warbixinta billaha ee Sucuudiga” taasoo la qoray 24-kii May 2019, ayaa lagu sheegay in lala wadaagay madaxda ugu sarraysa Imaaraadka, laakiin laguma daabicin mareegta ay leedahay Xarunta Siyaasadda ee Imaaraatka “Emirates Policy Centre”. hase yeeshee nuqul ay heshay jariiradda Middle Easty Eye ayaa soo bandhigay sirtan.
Jariiradda Middle Easty Eye ayaa qortay,
“Qorshaha Riyad ee bishii May waxaa lagu dajiyay qorshe lagu howl-galo oo lagu curyaamiyo dowladda Turkiga”.
Jariiraddu waxay kaloo leedahay,
“Qorshaha ugu wayn waa in la adeegsado xeelad kasta oo macquul ah oo culays lagu saarayo dowladda Turkey laguna wiiqayo awoodda madaxweyne Erdogan iyo in mashquul looga dhigo arrimaha gudaha dalka Turkiga taasoo hoos u dhigi doonta awooddiisa fursadna u noqon doonta mucaaradkiisa, ama in dhibaatooyin dhaqaale oo is xigxiga lagu riixo taasoo sababi karta inuu khalad ku dhoco oo kaddibna ay warbaahinta dalka & midda dibaddu aad u lafa-guraan.
Wargayska Middle Easty Eye ayaa suaalo ka weyddiiyay saraakiisha Xarunta Siyaasadda Imaaraadka mashaqadan taagan, laakiin way ka gaabsadeen ayay tiri jariiraddu.
IN LA XADDIDO KU LUGLAHAANSHAHA ARRIMAHA SIYAASADDA GOBOLKA.
Qorshaha Sucuudiga ayaa ah in Erdogan laga xaddido ka qaybgalka iyo wadaagga arrimaha ka dhacaya gobolka Barigga Dhexe.
Jariiraddu waxay tidhi
1. Boqortooyada Sucuudigu ayaa bilowday inay si tartiib tartiib ah u joojiso maalgashiga shirkadaha Sucuudiga ee Turkiga ku sugan.
2. In la yareeyo dalxiisayaasha u tamashle tagaya Turkiga, kaddibna dadka loo jiheeyo waddamo kale oo ay u dalxiis tagaan.
4. In Sucuudigu yareeyo iibisiga alaabta ka imaanaysa Turkiga iyo in la daciifiyo ku lug-lahaanshaha siyaasadda gobolka iyo midda dalalka Islaamka.
Wargaysku wuxuu tilmaamtay:-
“In dhaxal-sugaha Sucuudiga, Maxamed Bin-Salamaan uu qaatay go’aan uu isaga difaacayo eedayntii Ankara oo salka ku haysa dilka wariye Jamaal & sirdoonkii raggii dilay, dilkaasoo abuuray caro ka timid adduun-waynaha & in dolwadda Turkey ay soo bandhigtay caddaymo ku saabsan dilka wariyaha”.
Sirta la helay ayaa tiri….. “Madaxweyne Erdogan aad ayuu ugu fogaaday ololihiisa ku wajahan boqortooyada, gaar ahaan dhaxal-sugaha, isagoo adeegsanaya qaabka ugu xasaasisan ee dilka wariye Jamaal”.
Warbixinta ay diyaarisay Xarunta Imaaraadka ayaa tiri :- “Ankara maysan keenin wax caddayn ah oo muuqda oo lagu kabayo baaritaanka Sucuudiga ee ku saabsan dilka wariye Jamaal. Taa baddalkeeda Turkidu waxay warbixinno u dusiyeen warfaafinta, warbixinnadaasoo dhammaantood loogu tala-galay in khal-khal la galiyo sumcadda Boqortooyada iyo midda dhaxal-sugaha Maxamed Bin-Salmaan”.
Warbixintu waxay intaas ku dartay,
Xukuumadda Riyaad maysan ku darin inuu Mr, Erdogan ku guul-darraystay hadafkiisa ahaa inuu arrinta dilka Jamaal uu adduun waynaha garwadeen uga dhigo, lakiin Riyaad waxay leedahay waxaa la joogaa waqtigii aargoosiga”. Sida lagu sheegay warbixinta kasoo baxday Xarunta Siyaasadda Imaaraadka.
Hay’adda CIA iyo aqalka Congress’ka Maraykanka ayaa ku qancay warbixinta ay soo bandhigeen Turkida ee ku saabsan dilka Jamaal. Sidoo kale CIA iyaduna warbixin ay soo saartay ayay ku sheegtay inuu Maxamed Bin-Salmaan amray dilka wariyaha uuna lahaa fikradda howl-galinta xubnihii dilka gaystay.
CIA warbixinta ay soo saartay waxay tidhi “Ma jirto sabab la’aan ay arrintan ku dhici karto Maxamed Bin-Salaam oo aan ogayn ama aan ku lug-lahayn”. siday horay u daabacday jariiradda Wadhington Post.
Caddaymahaas oo idil, waxaa ka daba yimid mid ay samaysan Qaramada Midoobeey qaybteeda qaabilsan arrimaha aadanaha, taasoo haweenayda kiiskan u qaabilsanayd Agnes Callamard ay tiri, “Dhaxal-sugaha Sucuudiga ayaa amray dilka wariye Jamaal Khashoggi.
QORSHAHA LAGU CADAADINAYO TURKIDA OO BILOWDAY.
todobaadkii la soo dhaafay ayay soo shaaxbaxday xogtan ay qortay Imaaraadku ee sirta ah.
Sucuudiga ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo 80 gawaari oo xamuul ah ganacsi ah oo isugu jira dhar iyo dawooyin kasoo dagay dekedda Duba ee Sucuudiga.
Waxaa kaloo la hakiyay 300 oo konteenar ay ku jiraan qudaar ganacsi oo ka timid Turkey laguna joojiyay dekedda Jeddah ee isla Sucuudiga. Waxaa sidaas qoray jariiradda Middle East Eye oo kasoo xigtay saraakiil magacooda in la xuso diiday.
Waxaa iyana hoos-udhac ku yimid dalxiiskii tagi jiray Turkiga taaso horay u ahayd 276 kun oo hadda noqotay 234 kun 6-dii bilood ee ugu dambeysay sanadkan 2019, siday shaacisay wasaaradda dalxiiska ee Turkiga.
Sucuudiga ayaa Turkiga ku maalgaliyay adduun dhan 2-bilyan oo dollar sanadkii 2018, siday sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga, isla sanadkaas Turkidu waxay u dhoofiyeen Sucuudiga ganacsi gaaraya 2.64-bilyan oo dollar, halka Turkidu alaabada ay kasoo dhoofsadeen Sucuudiga ay gaartay 2.32-bilyan oo dollar.
Dowladda Turkiga way ka warqabtaa isku dayada uu wado Maxamed Bin Salaam ee uu ku xumaynayo xiriirka labada waddan, isagoo kala ilaalinaya xiriir toos ah oo dhex mara Erdogan iyo aabihii Boqor Salmaan.
Saraakiil in la xuso magacooda ka gaabsaday ayaa ku waramay inaysan la yaabanayn isku dayada ay Sucuudigu ku doonayaan inay Turkey ku ciqaabaan mowqifka ay Turkidu ka taagan tahay dilka wariye Jamaal Khaashoggi.
Khamiistii lasoo dhaafay Madaxweyne Erdogan ayaa taleefanka ku wacay Boqor Salmaan, isagoo kala xaajoonaya arrinta ku saabsan ganacsiga lagu hakiyay dekedaha Duba iyo Jeddah.
Laakiin saraakiil kale oo Turki oo magacooda diiday ayaa ku waramay, in wadahadalka taleefan ee labada masuul uu daarnaa oo kaliya waxyaabaha ka socda Syria iyo suaalo ay iska waydiiyeen qaddiyadda Falastiin.
Saraakiikhu waxay kaloo intaa ku dareen in wadahadalka uu Boqorku aad ula dhacay kuna taageeray Erdogan arrimaha ku saabsan Syria.
Wada-hadalkaas khadka teleefanka ayuu Madaxweyne Erdogan ku casuumay boqor Salmaan iyo qoyskiisa oo uu ku jiro wiilkiisa dhaxal-sugaha ah Maxamed Bin-Salmaan inay yimaadaan Turkiga.
DAAWO: Shirkada Facebook Oo Xidhay Bogag Iyo Ciwaano Tirsan Oo Ay Ku Jiraan Kuwo Lagu Faafin Jiran Madaxbanaanida Somaliland
Toosh Cadaawe Dhagaxaystay Oo Shacabkiisa Ku Soo Ifaya Ayaan U Aqaanaa” Gudoomiyaha Xisbiga Wadani Ee Gobolka Awdal Oo Karbaashay Maayirka Borama + VIDEO
TOOOS U DAAWO: Live : Meyda Oo La Keenay Iyo Aaska Qaran Ee Gudoomihii Hore BanaadirYariisow..
Mustafe Haji August 4, 2019 August 4, 2019
DAAWO: Raysal Wasaare Khyre Oo Kulan Iskugu Yeedhay Haayadaha Aminiga Ee Lagu Wareejiyay Amniga Magaalada Dhuusamareeb
Bnnstaff Bnnstaff August 3, 2019